के कारणले आउँछ डन्डीफोर ? जोगिने कसरी ? – Online Bichar
Online Bichar 6th November, 2020, Friday 9:40 PM
डन्डिफोर देख्नुहुन्न, निचोरिहाल्ने धेरैको बानी हुन्छ ।
यो एकदम गलत काम हो । डन्डिफोर नछुनु नै ठीक हुन्छ ।